Ukuqina kwamadoda | Amadoda anesitayela (Ikhasi 2)
Sikutshela ngokuningiliziwe konke odinga ukukwazi mayelana nomshini wehlombe. Thuthukisa ukubambezeleka kwakho ngalokhu kuzivocavoca okuhle.
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi ngomshini wokuthambekela kanye nezici zawo. Funda kabanzi ngakho lapha.
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nalokho okudingayo ukuze ube nejimu ekhaya. Funda ngakho lapha.
Ukuzivocavoca kwesifuba se-Dumbbell
Senza uhlu lokuzivocavoca kwesifuba okuhle kakhulu ngama-dumbbells ukuthuthukisa ukuzuza kwemisipha.
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokuzivocavoca okuhle emuva ngama-dumbbells. Funda ukuba nomhlane omkhulu
Sikufundisa konke odinga ukukwazi ngokuqeqeshwa kwe-AMRAP. Funda kabanzi mayelana nobuhle nezinzuzo zako.
Kulesi sihloko sikutshela ukuthi yiziphi izivivinyo ezinhle kakhulu zezinqe nokuthi yini okufanele uyicabangele ukuze uthuthukise.
Funda konke odinga ukukwazi mayelana ne-hypertrophy nokuthi ungandisa kanjani imisipha yakho. Yazi izimfihlo lapha.
I-Calisthenics, eyaziwa nangokuthi i-bodyweight, uhlobo lokuqeqeshwa olusebenzisa isisindo sakho ukuqinisa imisipha ...
Sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nezinzuzo zokuzivocavoca kwe-dumbbell nokuthi yini okufanele uyicabangele.
Ungakwenza kanjani ukuhlala kahle
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokuthi ungahlala kanjani kahle. Funda kabanzi lapha.
Izindlela zokuzivocavoca umzimba
Kulesi sihloko sikutshela okuguqukayo okuyinhloko kwemikhuba yokuzivocavoca nokuthi kufanele ihlelwe kanjani.
Ukuzivocavoca izinqe kwabesilisa
Kulesi sihloko sikutshela ukuthi yiziphi izivivinyo ezinhle kakhulu zama-glute zamadoda. Thola ukuthi zenziwa kanjani lapha.
Kulesi sihloko sikutshela ukuthi yiziphi izivivinyo ezinhle kakhulu zokuqinisa amadolo akho nokuthi ungawenza kanjani. Funda kabanzi ngakho lapha.
Kulesi sihloko sikufundisa konke odinga ukukwazi mayelana ne-triceps fundus kanye nezici zomsebenzi. Funda ukuba nama-triceps amakhulu.
Izinhlobo zomzimba: ama-somatotypes
Sizokutshela ukuthi yiziphi izinhlobo zomzimba eziyinhloko ezihlukaniswe ngama-somatotypes. Yazi zonke izici zayo, izinzuzo nezinkinga zayo.
Kulesi sihloko sizokutshela izivivinyo ezinhle kakhulu zokuthola ukuguquguquka. Funda zonke izinzuzo ezinikezwa yilezi zivivinyo.
Kulesi sihloko sikutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokuphumula okusebenzayo. Funda kabanzi mayelana nezinzuzo zayo lapha.
Ukusebenzisa amapulangwe esiswini kungumbono omuhle kakhulu ukukhipha le ndawo. Noma kunjalo, ungazilimaza. Lapha sichaza konke.
Izinzuzo zokuhamba ngebhayisikile
Ukuhamba ngebhayisikili uhlobo lomdlalo oluzuzayo ezicini eziningi, ngokomzimba nangokwengqondo. Thola amakhono amahle angakhombisa
Umqeqeshi womuntu siqu
Kule ndatshana sichaza ukuthi isibalo somqeqeshi womuntu siqu siqukethe ini nokuthi kubaluleke ngani. Funda kabanzi ngakho lapha.
Sikufundisa ukubaluleka kokwenza ukupholisa ezemidlalo ngemuva kweseshini yokuzivocavoca umzimba. Funda ukuthi ungakugwema kanjani ukulimala lapha.
Kulokhu okuthunyelwe sizokutshela zonke izici zemidlalo yokuzifudumeza, yenzelwe ini nokuthi yiziphi izinhlobo ezikhona. Funda ukugwema ukulimala.
Kulesi sihloko ngikukhombisa ukuthi ungamaka kanjani i-abs noma ngabe yiliphi izinga lakho. Funda ngalesi sihloko ngaphandle kwamanga, izinganekwane, noma okulindelwe okungamanga.
Izinzuzo zokweqa intambo
Kulokhu okuthunyelwe sizokutshela ngokuningiliziwe ukuthi yiziphi izinzuzo zokugxuma intambo njalo. Funda konke ngakho.
Kulesi sihloko ungathola zonke izinzuzo zokuphotha. Funda ukuthi lo msebenzi ungayisiza kanjani impilo yakho.
Izinzuzo zomqeqeshi we-elliptical cross
Thola izinzuzo ezibalulekile zebhayisikili elliptical, umshini wokuzivocavoca umzimba onikeza ukuzivocavoca okuphelele kakhulu.
Thola zonke izinzuzo zemidlalo futhi umangale ngemiphumela eminingi emihle enayo emzimbeni nasengqondweni.
Kule ndatshana sikufundisa okhiye bokuya ejimini ungafi uzama. Funda konke ngakho kulesi sihloko.
Thola izinzuzo ezimangalisayo zokuhamba nokuthi ungaluguqula kanjani lolu hlelo lokuzivocavoca lube yinzuzo yakho.
I-Trenbolone isetshenziselwa ukwakha umzimba ukuthola imisipha esheshayo esheshayo. Yazi lapha yonke imiphumela yayo emzimbeni.
Ukuzivocavoca ukuze unciphise isisindo
Kukhona izivivinyo eziningi zokwehlisa isisindo. Funda ngemisebenzi ezokusiza ukuthi uchithe amakhilogremu athe xaxa futhi uthole umzimba ochazwe kabanzi.
Squat likaHack yilelo elaligqokwe
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi kufanele uyenze kanjani iHack Squat nokuthi yimiphi imisipha esebenza kuyo. Funda konke ngalokhu kuvivinya umzimba lapha.
Kulesi sihloko uzothola konke odinga ukukwazi mayelana nama-burner amathathu asebenzayo: i-caffeine, i-synephrine netiye eliluhlaza.
I-Clenbuterol isetshenziselwa ukuthuthukisa isisindo somzimba nokushisa amafutha. Kodwa-ke, kunemiphumela eminingi emibi yezempilo. Bazi lapha.
Thola okuningi emshinini wakho wokucindezela waseFrance ngokuthuthuka okungcono kwemisipha ye-triceps. Faka lapha ukwazi kabanzi.
Umshini wezempi ungokunye kokuzivocavoca okuyisisekelo okuhle kakhulu ukwenza ngcono ama-deltoid ethu. Lapha sikukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani kahle.
Sichaza konke odinga ukukwazi ngokuqeqeshwa. Ngabe ucabanga ukuthi kuhle noma kubi ukuziqeqesha ngezintambo zezintambo? Lapha sikuxazululela yona.
Thola izinzuzo eziningi zesibhakela zomzimba nengqondo. Indlela yokuthola ukwakheka indala njengoba isebenza ngempumelelo.
Kulokhu okuthunyelwe sichaza ngokuningiliziwe ukuthi yikuphi ukuzivocavoca okuhle nge-fitball futhi sikufundisa ukuthi ungakwenza kanjani. Ngena ungene ngesimo.
Faka futhi wazi konke odinga ukukwazi ngokuqeqeshwa okusebenzayo. Funda mayelana nokuthi yini esebenzayo nokuthi ilusizo kangakanani. Ukungena!
Ukugxila kwe-hip kubhekwa njengokuzivocavoca okuhle kakhulu kokusebenza kwe-glutes. Faka lapha futhi ufunde konke ngenqubo elungile. Sikuchazela kabanzi.
Ukuphakamisa noma ukubambelela
Sikutshela konke odinga ukukwazi ngezinhlobo zokubambelela ejimini nokuthi ziyini izici ze-supine noma ukubambelela okuthambekele.
Faka futhi ufunde phakathi kokukhethwa okuhle kakhulu kokuzivocavoca ukwenza izibilini ze-oblique. Yazi izici eziyinhloko zokuthuthukisa ukusebenza.
Yehlisa okhalweni emadodeni
Thola amathiphu amahle kakhulu wokunciphisa okhalweni emadodeni futhi ususe ngempumelelo ukuqongelela kwamafutha.
Kulesi sihloko uzokwazi ukwazi yonke imihlahlandlela edingekayo yokwenza i-abs ye-isometric ephelele futhi ube nephakethe lesithupha.
I-triceps brachii ingenye yemisipha ekhohliwe lapho kuqeqeshwa izingalo ejimini. Thola lapha yonke imisebenzi yayo, ukuthi ungayiqeqesha kanjani nokuningi!
Yini i-electrostimulation, ukuthi isebenza kanjani, izinganekwane namaqiniso
I-Electrostimulation iyindlela esetshenziswa emhlabeni wezemidlalo ukukhulisa ukusebenza nokuthola imiphumela ngokushesha. Ngabe ufuna ukumazi kahle?
Izinzuzo zokuqeqeshwa ngokukhuphuka izitebhisi
Thola izinzuzo zokuqeqeshwa ngokukhuphuka izitebhisi, kanye namathiphu amahle kakhulu wokuzijwayeza lokhu kuqeqeshwa okuphelele.
Funda ukuthi ziyini izivivinyo ze-aerobic, izinzuzo zazo zomzimba nezengqondo, namathiphu amaningi wokuthi ungakwenza kanjani. Kwehluke kanjani ekuzivocavoca nge-anaerobic? Yithole lapha!
Ukumelana nokuzivocavoca umzimba kungathatha ukuqina kwakho kuye ezingeni elilandelayo. Thola lapha ukuthi ungakwenza kanjani lokhu kanye nezinzuzo eziningi ezimele zona.
Ukuzivocavoca ukuze ulahlekelwe yisisu
Thola izivivinyo ezinhle kakhulu zokwehlisa isisu. Ukuzivocavoca okuzokusiza ukuqeda amafutha asesiswini ngokweqile.
Ukuzivocavoca ukuqinisa ama-oblique
Ngabe ufuna ukuthola izibopho ezinamandla? Funda ukuthi yikuphi ukuzivocavoca okusebenza kahle ukusebenzela le ngxenye yomzimba ebalulekile.
Ngezintambo ezimbili ingxenye yomzimba imisiwe. Ngaphezu kwalokho, kusekelwe emhlabathini nasekuguquguqukeni, ukuqina, amandla nokumelana kuyatholakala. Ukuzivocavoca kwe-TRX: qina ngohlu lwethu lwenqubo nokuzivocavoca
Isikhathi esihle sosuku sokuzivocavoca umzimba
Ukuzivocavoca ngokuqhubekayo futhi nsuku zonke kungenye yemisebenzi enempilo kakhulu. Isigqi sethu sebhayoloji silawula imingcele.
Ama-Smartbands wokuqina neminye imidlalo
Umphelelisi ongcono kakhulu wokuqina ngamasongo noma amabhande ama-smartband. Kunokuhlukahluka okuningi nomehluko phakathi kwabo. Yikuphi okufanele kakhulu?
Ihlobo selifikile. Ibhishi liyindawo ethanda abantu abaningi eholidini. Ziyini izicathulo ezifanele?
Kuhle yini ukwenza izinsimbi? Izingozi zalo mdlalo
Kuhle yini ukwenza izinsimbi? Lo ngumbuzo abantu abaningi abazibuza wona, ikakhulukazi lapho befuna ukushintsha imikhuba nokwenza ngcono isimo sabo somzimba.
Konke odinga ukukwazi ukuhamba izintaba
Uma udinga ukwehluka ukwenza futhi unqamule usuku nosuku, ukuhamba ngezinyawo kuyindlela enhle kakhulu. Inempilo, yemvelo futhi izuzisa kakhulu.
Ungayikhetha kanjani i-smartband engcono yokuqina kanye nokuvivinya umzimba
Ungayikhetha kanjani i-smartband engcono kakhulu? Phakathi kwamamodeli ahlukahlukene kunokwehluka okuningi; ezinye zazo zibandakanya ukuqapha ukushaya kwenhliziyo yakho.
Imishini yesitayela kakhulu yokusebenza
Ukukhethwa kwezingcezu ezizongeza isitayela esiningi kwimishini yakho yokusebenza, into ehlala ihlanganisa isisusa.
Imidlalo emihlanu eshisa ama-calories amaningi kunokugijima
Ukugijima kungumdlalo omuhle, kepha uma kukhulunywa ngokushisa amakhalori akuyona ephumelela kakhulu. Le midlalo emihlanu idlula kude kakhulu kuyo.
Ungayakha kanjani imilenze eminingi yemisipha njengochwepheshe
Sichaza inqubo ejwayelekile yokuzivocavoca ekhona ukuqinisa imilenze ngendlela esheshayo nehlala njalo.
Isitayela Kumasondo Amabili - Ugqoka Kanjani Ukuze Ibhayisikili Lakho Lisebenze
Sichaza ukuthi yiziphi izingubo ezinethezekile nenhle kakhulu ngamabhayisikili ukusebenza, umkhuba onempilo, olungele imvelo futhi osindisa imali.
Izixazululo zokwandisa ubukhulu bemisipha ngenyanga
Uma ufuna ukwandisa isisindo esinciphile njengento eza kuqala hhayi isisindo nje, kufanele ugcizelele amathiphu alandelayo, ngakho-ke unethemba lokuthola ama-2 kilos emisipha emsulwa enza konke kahle.
Ungakuthola kanjani ukukhuthazela kokubhukuda?
Uma ungeyena uchwepheshe ngesitayela esithile sokubhukuda, kungakuhle ukuthi ushintshe isitayela sakho ubude.
Ukuphotha kungumsebenzi we-aerobic okulula kakhulu ukuwenza futhi unezinzuzo ezahlukahlukene zomzimba nezempilo.
Ubhanana, i-oatmeal ne-walnut protein shake
Ukunyakaziswa kwamaphrotheni kuyindlela elula futhi emnandi yokwengeza amaprotheni nezakhi ekudleni kwakho, ikakhulukazi okunconyelwe ukuthi kudliwe phakathi kokudla noma ngemuva kokuzivocavoca.
Yize kubonakala kulula kakhulu, ukweqa intambo kuwukuzivocavoca okuhle kakhulu komzimba, kuthuthukisa ukukhuthazela, ukuqinisa kanye nokuqinisa imisipha.
Izithasiselo ezingcono kakhulu zokufaneleka
Angikaze nginake kakhulu ukudla, ngaya noma ngibuya ejimini, kwesinye isikhathi ngangiziqeqesha kanzima, kepha manje ngibona amandla ...
I-Gymnastics nomlingani wakho (Ingxenye II)
Ukwenza ukuzivocavoca umzimba njengombhangqwana kunezinzuzo eziningi kunokuzenza wedwa. Ababili ngababili bumnandi ngokwengeziwe
Yimiphi imidlalo yabesilisa eyedlula zonke?
Wonke amadoda ayathanda ukwenza ezemidlalo, kodwa kuyiqiniso ukuthi amanye angabesilisa kakhulu kunamanye. Ngokusho kwe ...
Sihlala sisho ukuthi ngaphambi nangemva kokwenza umdlalo, kufanele senze ukunwebeka noma ukuzilolonga, okubizwa nangokuthi ...
Ukuzivocavoca kwemilenze: Abesifazane (III)
Ukuqhubeka nencazelo yokuzivocavoca imilenze, futhi ikakhulukazi imisipha, manje sikulethela abesilisa abane ...
Ungazithola kanjani izingalo ezimakiwe?
Iphupho lawo wonke umuntu wesilisa ukuthi afake izingalo zakhe ukuze abukise phambi kwabesifazane. Yilokho kubo ...
Ukubaluleka kokuphumula ekusebenzeni ngokomzimba
Ukuzivocavoca okuhle ngokomzimba ngaphezu kokufudumeza umzimba, ukufaka amanzi emzimbeni nokudla okunomsoco kufaka ukuphumula okuhle ukuze ...
Amathiphu wokuba ne-abs echazwe kahle
Ama-abs amakiwe angaphezulu kwanoma yini eyisidingo sobuhle emhlabeni wasentshonalanga, afunwa ngabaningi futhi azuzwe ...
Iqoqo elisha lezicathulo zeMcLaren Sport
IMc Laren Sport yethule iqoqo elisha lezicathulo, okusobala ukuthi lihloselwe ezemidlalo yezimoto. Okufanayo…
I-Titan T1 Gym, ijimu esekhaya lakho
Kulabo abakuthola kunzima ukushiya amakhaya abo baye ejimini ngoba isimo sezulu sibi noma ...
Ukuzivocavoca ukugwema ubuhlungu besinqe
Sesikhulume kaningi ngezinhlungu ezisezingeni eliphansi nokuthi singazigwema kanjani lezo zinhlungu ezimbi. Namuhla sizosiza okuningi uku ...
Uma ucabanga ukugijima nokugcina isimo somzimba esihle, funda-ke futhi uzobona okuningi ...